स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफल व्यवस्थापन
नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ दफा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भनी परिभाषित गरेको हुँदा राज्यद्वारा सन्चालित स्वास्थ्यका विविध कार्यक्रमहरुले सबैतहका सीमान्तकृत गरीब तथा पिछडिएका हिमाल पहाड तराईका जनताहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुंच ग्यारेन्टी गर्न स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम ल्याइएको हो। यस कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न २०७४ मा स्वास्थ्य बीमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।… पुरा पढौ
हाम्रो जीवनमा तीर्थयात्रा को ठुलो महत्व छ। तीर्थ शब्द ती र थ बाट वनेको छ। 'ती’ को शाब्दिक अर्थ तीन हुन्छ र र्ँथ’ भन्नाले अर्थ अथवा प्रयोजन भन्ने हुन्छ। यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ तीर्थ यात्राबाट ३ लक्ष प्राप्त हुन्छ। संसारमा ४ वटा चिजलाई पुरुषार्थ भन्ने गरिन्छ। धर्म, अर्थ, कार्म, मोक्ष पुरुषार्थका प्रकार हुन। मानिसले विहान देखि वेलुका सम्म जुन… पुरा पढौ
नेपाल संघीय गणतन्त्रको रुपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। समावेशी, समानुपातिक प्रणालीबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदहरु निर्माण भइसकेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारहरुको ध्यान मुलुकभित्र सुशासन सुव्यवस्था कायम गरी सरकारहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु आम नागरिक समक्ष कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ। आम जनताको जीवनस्तरमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, समृद्धि कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ। १. … पुरा पढौ
कृषि परियोजनाको अभाव
कृषि विकासमा निजीक्षेत्रको सकृय सहभागिता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले पञ्चायतकालमा नै कृषि विकास बैंकको स्थापना गरिएको थियो। वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्ने क्रममा कृषि विकास बैंकलाई बाणिज्य बैकमा रूपान्तरण गरियो। नाम परिवर्तन नगरी काम परिवर्तन गरेको यथार्थ कृषि विकास सम्बद्ध सरकारी निकायले खासै चासो राखेका रहेनछन्। नया सम्बिधान जारी भए पश्चात तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न… पुरा पढौ
ओलीको भारत भ्रमण : बुख्याँचा हुने जोखिम
जंगली पशु पक्षीहरुबाट आफ्नो खेती जोगाउन किसानहरुले आफ्नो खेतको डिलमा झुम्राको मानिस बनाएर ठड्याएका हुन्छन्। झुम्राको मानिस चिनाउने शब्द हो-बुख्याँचा। आजै शुक्रबार, प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली प्रस्थान गर्दैछन्। नेपालीलाई सदा झै चिन्ता छ, कुनै शक्तिशाली तथा राष्ट्रवादका आइकन (प्रतीक) ठानिएका ओलीलाई दिल्लीका चाणक्यहरुले बुख्याँचामा परिणत गरेर पठाउने त होइनन्। कामना छ यस्तो नहोस्। भ्रमणको औचित्य के.पी ओलीको पहिलो प्र.मं. को कार्यकाल… पुरा पढौ
पर्यावरण हरेक जीवसित जोडिएको वातावरणीय अवस्था हो। कुनै पनि जीव वरपरको अवस्थामा हुर्कन्छ, बढ्छ र अन्तमा आफूजस्तै सन्तति छोडेर जीवनचक्र पूरा गर्दछ। वनस्पति होस् या प्राणी सबै प्रकारका जीवित वस्तु आआफ्नै वातावरणमा हुर्कन्छन्। पृथ्वीमा लाखौं वर्षदेखि तीन करोड जीवजीवात्मा आफ्नै वातावरणमा बाँच्दै आएका छन्। सिगों पृथ्वी नै एउटा घर हो,यो लाखौं प्रकारका जीवहरुको आश्रयस्थल हो। यसको सबै भागमा एउटै प्रकारको… पुरा पढौ